Ururka ONLF oo Guddoomiye Cusub Doortay (Akhriso) – Radio Daljir
Ururka ONLF oo Guddoomiye Cusub Doortay (Akhriso)
Nofeembar 12, 2019 8:56 b 0
Shir dhowr maalmood uga socday magaalada Godey ayaa Jabhadda Waddaniga ee Xoreynta Ogaadeeniya (ONLF) waxa ay Cabdiraxmaan Mahdi, ahaana Hoggaanka Arrimaha Dibadda, u dooratay Guddoomiyaha cusub ee ururka ONLF.
Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey ayaa loo doortay inuu noqdo Guddoomiyaha Cusub ee Ururka ONLF, kaasi oo kamid ahaa aas-aasayaasha Ururka.
C/raxmaan Maadey waxa uu helay oo uu ku guulaystay 340 cod, halka Axmed Yaasiin oo la tartamay isna uu helay codad gaaraya ilaa iyo 251, isla markaana waxaa halaabay 7 cod, iyadoo Doorashadu aheyd mid si qarsoodi ah loo codeynayay oo warqadaha lagu ridayay Sanduuq.
Guddoomiye C/raxmaan Maadey ayaa bedelaya Guddoomiyihii hore ee ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan oo ahaa Guddoomiyihii Ururka xilligii ay halganka dagaalka ay ku jirtay.
Doorashadii Ururka ONLF ee ka dhacday Magaalada Godey ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa codaynayay in ka badan 600 oo ergo, iyagoona ugu dambeyn Guddoomiye u doortay C/raxmaan Maadey.
Doorashada Ururka ONLF ayaa ku soo aaday, xili Ururka heshiis uu la galay Itoobiya, Doorashada ayaa aheyd mid isha lagu wada haayay, waana tii ugu horeysay ee Guddoomiyaha Ururka loogu doorto.
Daljir kala soco waraysiga guddoomiyaha cusub.
Security Council: Letter dated 27 September 2019 from the Panel of Experts on Somalia addressed to the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia